Boldenone Undecylenate (Equipoise) Waxyaabaha qashin (13103-34-9) | AASraw
/ Products / Qaar kale waxay / Boldenone Undecylenate (Equipoise) Qalabka ceyriinka ah
Rating: SKU: 13103-34-9. Category: Qaar kale waxay
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ah ee Boldenone Undecylenate (Equipoise) Qalabka cagaaran (13103-34-9), iyadoo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Boldenone Undecylenate (Equipoise) Cajiida waxyaallaha cagaarka ah
Boldenone Undecylenate (Equipoise) Cuntada asaasiga ah ee aasaasiga ah
Name: Boldenone Undecylenate (Equipoise) Qalabka cagaarka ah
Qaaciddada Molecular: C30H44O3
Miisaanka kelli: 452.6
Dhibcaha Biyaha: RT
Kaydinta Nabadgelyada: -20
Color: Saliid cad
Boldenone Undecylenate Isticmaalka alaabta khatarta ah wareegga steroids
Qalabka Cagaarka Cagaarka ah
Qalabka Cagaarshowga Caadiga ah waxaa caadi ahaan loo yaqaan 'Bold U, BU, Waxyaalaha Cagaarka ah,' EQ by bodybuilders ama milkiilayaasha UGL.
Boldenone Undecylenate (Equipoise) Cuntada loo isticmaalo
Boldenone Undecylenate Waxyaabaha cagaaran waxaa badanaa loo isticmaalaa saliid lagu muday. Suuqa, waxaa jira 200mg / ml, 250mg / ml, 300mg / ml, qaar ka mid ah UGL ayaa xitaa dhigay 350mg / ml iyo 400mg / ml. Laakiin, aad ayay u xoog badan tahay in la isku duro.
Boldenone Undecylenate Waxyaabaha qashinka ah ayaa ugu horreyn la siman hormoonka Dianabol, marka laga reebo hoormoonka Dianabol waa isticmaalka afka iyo waxa ku jira xerada 17AA sababtuna waxay tahay kaliya sideed saacadood oo nus ah. Qalabka Cagaarshowga Cagaarka ah kuma jiraan kooxda 17AA ee ka dhigaysa Dianabol inay sii socoto, taasoo keenta in EQ joogtada jirka sii dheeraado sidaas darteedna ka dhigeysa mid aad waxtar u leh dhismaha murqaha cufan iyo xoog.
Boldenone Undecylenate Waxyaabaha loo yaqaan 'Bootenone Undecylenate', oo loo yaqaan 'EQ', ayaa loo yaqaan 'EQ', oo loo isticmaalo jirka jirka iyo cayaartoyda si loo kordhiyo muruqyada, kordhinta dulqaadka iyo wax soo saarka unugyada dhiigga cas ee jidhka kaas oo sidoo kale caawiya adkeysiga sababtoo ah unugyada dhiigga ee casaanka qaada ogsijiinka iyo haddii dhiiggaagu hodan yahay oxygen, waxaad sii jirtaa mudo dheer inta lagu jiro jimicsiga adag ama waxqabadka. Boldenone Undecylenate Qalabka hilibku, ama EQ wuxuu caan ku yahay cayaaraha, jimicsiga iyo dhiirigeliyaha jirdhiska maxaa yeelay waxay bixisaa tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah. Wareegyadaasi waxaa lagu magacaabaa faa'iidooyinka EQ. EQ waxaa loo maamuli karaa qiyaaso kala duwan oo ka kala baxsan 200mg ilaa 600mg asbuuc kasta muddo aan ka badnayn laba iyo toban toddobaad.
Digniinta Boldenone Undecylenate Qalabka Cagaarka
In kasta oo ay firfircoon tahay muddo dheer, qalabka loo yaqaan 'Equipoise Raw Raw' waxaa lagu duraa ugu yaraan hal mar asbuucii cayaartoyda. Waxaa badanaa loo isticmaalaa qiyaasta 200-400mg (4-8 ml, nooca 50mg) usbuucii ragga, 50-75 mg asbuucii dumarka. Haddii nooc 25mg ah uu noqdo sheyga kaliya ee la heli karo, mugga duritaanka wuxuu noqon karaa mid aan raaxo lahayn. Jadwalka qiyaasta ayaa loo sii qaybin karaa, laga yaabee in irbado la siiyo maalin kasta si loo yareeyo raaxo la'aanta. Midna waa inuu sidoo kale taxaddar u yeeshaa inuu si joogto ah u wareego goobaha duritaanka, si looga fogaado xanaaqa ama infekshinka. Haddii mugga saliidda ee aad u weyn lagu duro hal goob, waxaa soo bixi kara barar u baahan dheecaan qalliin. Si looga fogaado dhibaatadaas oo kale, ciyaartooydu waxay inta badan ku xaddidi doonaan irbad kasta oo ah 3ml waxayna dib u isticmaali doonaan goob kasta oo aan ka badnayn hal mar usbuucii, iyadoo la doorbidayo toddobaad kasta. Qalabyada loo yaqaan 'Equipoise Raw Raw' tani waxay u baahan kartaa iyadoo la isticmaalayo ma aha oo kaliya gluteus, laakiin sidoo kale bowdyaha bannaanka ee goobta duritaanka. Dabcan dhammaan dhibaatooyinka laxiriira 25mg iyo 50mg waxsoosaarka la soosaaray waxaa lagu tirtiray kuwa cusub ee 100 mg iyo 200mg / ml ee steroidkaan, taasoo si cad u siineysa isticmaalaha xaddiga qiyaasta iyo raaxada duritaanka.
Dhibaato halis ah oo ah qalabka Root Equipoise waa nolosheeda badhkeed, taas oo malaha ugu yaraan maalmaha 12. Tani waxay dhalinaysaa waqti dheer oo ah mudista ugu dambaysa ee heerarku aysan ku filneyn heer sare oo loogu talagalay anabolismka ugu wanaagsan, mana hoos u dhac ku filan si ay u suurtagasho in ay soo noqoto. Xalka dhibaatadani waa in la isticmaalo qalabka Cuntada qalalan ee qaybta hore ee wareegga.
Ka sokow doorbididda EQ oo ka sarreeya Dianabol, qalabka Equipoise Raw ayaa dhowaan ku koray caan ka ah waana midka ugu wanaagsan ee awood u leh. Tababarayaashu waxay tixgelinayaan EQ inay tahay bedelka loogu talagalay Deca Durabolin, si fudud oo loo hubiyo in xoogga korodhka iyo tayada miisaankana uu ku dhaco EQ ku dhaco iyada oo aan waxyeello ka soo gaadhin Deca. Intaa waxaa dheer, EQ si waxtar leh ayuu u saameeyaa wareegga dhiigga ee jirka oo dhan, kaas oo bixiya muruqyada jirkaada oo leh dhiigbaxa ugu sareeya ee ay u baahan yihiin inta lagu jiro xilliyada tababarka iyo / ama kor u qaadista.
Ma aha wax dhisme deg deg ah, halkii qalabka Equipoise Raw ayaa la eegi doonaa si ay u bixiso tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah oo awood leh iyo murqo tayo leh. Saameynta ugu fiican ee daawadan ayaa la arkaa marka loo isticmaalo wareegyada dheer, inta badan waxay soconayaan in ka badan toddobaadyada 8-10 muddada. Muruqyada la helay waa in aysan aheyn kuwa buluugta leh ee loo arko inrogens, laakiin aad loo qeexay oo adag. Maadaama boodbada biyaha aysan si weyn ugu baahsaneyn dhexdhexaadiyaha muruqa, inta badan ee cabbirka laga helay wareegga qalabka cuntada ee "Equipoise Raw" ayaa la sii hayn karaa ka dib markii daroogada la joojiyay. Waa mid xiiso leh in la ogaado in qalabka qaabdhiska ah ee Root Equipoise Raw iyo daroogada caadiga ah ee Dianabol ay ku dhow yihiin isla midka. Xaaladda Qalabka Cagaarka ah ee loo yaqaan 'Equipoise Raw compound' wuxuu isticmaalaa aaladda L7beta (undecylenate), halka Dianabol uu yahay 17 alpha alkylated. Taas ka sokow tan molecules waa isku mid. Dabcan waxay u dhaqmaan si ka duwan jirka, taas oo muujineysa saameynta 17-methylation in ka badan kaliya waxtarka afka ah ee steroid ah.
Tani waa tijaabo aasaasi ah iyo qalab isku dheelitiran. Qalabka loo yaqaan 'Equipoise Raw Raw' wuxuu u oggol yahay qiyaasta guud ee hoose ee testosterone, iyada oo aan wax badan loo hureynin marka la eego guulaha la filayo. Soo dhiska Estrogen waa in lagu xakameyn karaa xaruntan, laakiin wali waa inuu gaaraa heer uu ka caawinayo kor u qaadista xaalad dhiska. Bilaabasho weyn oo murqo-dhisid ah. Wareeg weyn oo loogu talagalay dhammaan bilowga jimicsiga jirka iyo kuwa kale ee doonaya inay ku kasbadaan cufnaanta. Natiijooyinka wareegga ee guulaha ballaaran ee leh sifooyinka dhexdhexaadka ah.
Boldenone Undecylenate Qalabka hilibku
EQ waa nooc nooc oo caano ah. Sii dalbasho 10grams / 10ml.
Boldenone Undecylenate Waxyaabaha Khatarta Suuq-geynta